बुधबार, ०५ कार्तिक २०७७, ०७ : ३७
कलाकार सम्झना बुढाथोकीकाे नाइट अनुभव ‘पिउने मान्छे भएन भने ल्याङ लाग्छ ’
डान्सबारमा जाँदा पिउने मान्छे भएन भने ल्याङ लाग्छ । पिउनेसँग नै गफ मिल्छ । आफैँ ड्राइभ गर्नुपर्ने भएकोले मातेर लड्ने गरी भने पिउँदिन ।
‘डान्सरको पनि ब्वाइफ्रेन्ड, ग्राहकको पनि ब्वाइफ्रेन्ड’
हास्य कलाकार महादेव त्रिपाठी जादुगर मात्र होइनन्, सिरियल र फिल्ममा चलेका पनि कलाकार हुन् । उनी चलचित्रमा आउनुअघि थुप्रै डान्सबारमा नाचे । उनले डान्सबारमा १२ वर्ष बिताएका छन् । उनीसँग डान्सबारको अनुभवबारे शुक्रबारकर्मी भोला अधिकारीले गरेको कुराकानी :
ब्वाइफ्रेन्डसँग नाइट क्लब जान्छु
नाइटमा मदिरा पिउन मज्जा आउँछ । जति पियो उति मज्जा हो नाइट लाइफ । तर मातेर लड्ने गरी भने खाएकी छैन, ज्यानले धानेसम्म भने पिउने गरेकी छु । साथीहरु पनि मजस्तै गरी पिउँछन् । अरूले पिएर लडेको देख्दा मज्जा लाग्छ
‘लान्छु भन्ने ठिटाहरु त कति आउँछन्, आउँछन्’
रात्रिकालीन व्यापारमा मदिरा पिउनेहरु नै बढी आउने हुन् । कतिपय पारिवारिक माहोलमा आएका हुन्छन् । लान्छु भन्ने ठिटाहरु त कति आउँछन्, आउँछन् । तर लान्छु भन्दैमा जानु त भए नि !
‘एउटीले म यहीँ सुत्छु ल्याङ नगर्नु ल भनिन् ’
जोरपाटीबाट ३ जना केटी ट्याक्सीमा चढे । उनीहरुले नयाँबसपार्क जाउँ भने । उनीहरु मातेर ल्याङ भएका थिए । मैले उनीहरुलाई लिएर बसपार्क पुगेँ । त्यहाँ पुगेपछि २ जना झरे । एउटी भने म यहीँ सुत्छु दाइ ल्याङ नगर्नु ल भनिन् ।
गायक शिव परियारकाे रात्रिकालिन अनुभव : ‘पिउँदापिउँदै छर्लङ्गै उज्यालो भो’
कलाकारिता क्षेत्र आफैंमा व्यस्त बनाउने कर्म हो । यसमा निश्चित कार्यतालिका हुन्न । रातदिन खटिनुपर्ने पेसा भए पनि कलाकारको मनमा यसो रमाइलो पनि गरौं न भन्ने लाग्छ नै । रात्रिकालीन रमाइलोमा जम्ने कलाकार पनि त्यत्तिकै छन् । नाइट लाइफमा कत्तिको रमाउँछन् कलाकार ? यो पटक गायक शिव परियारको अनुभव ।
'ग्राहकको आग्रहमा विकिनीमा नाचियो'
डान्सबारमा आउने सबै ग्राहक एकै किसिमका हुन्नन् । कोही ग्राहक डान्सरको हात समातेर बसेरै रमाउँछन् । कोही अलग्गै बसेर सँगै खाना खान पनि खोज्छन् । ग्राहकजस्तै कोसँग कस्तो व्यवहार गर्ने त्यो डान्सरमा पनि भरपर्छ ।